Ma dhab baa inuu jiro heshiis horudhac ah oo u dhexeeya Jules Kounde iyo naadiga Chelsea si uu ugu soo biiro? – Gool FM
Ma dhab baa inuu jiro heshiis horudhac ah oo u dhexeeya Jules Kounde iyo naadiga Chelsea si uu ugu soo biiro?
Ahmed Nur December 25, 2021
(Seville) 25 Dis 2021. Difaaca kooxda kubadda cagta Sevilla ee Jules Kounde ayaa lasoo warinayaa inuu si shaqsi ah ula heshiisyay naadiga Chelsea oo dooneysa saxiixiisa, waxaana ay isku raaceen inuu sanadka soo aaddan u dhaqaaqo Galbeedka magaalada London.
Difaaca Faransiiska ah ayaa bartilmaameed weli u ah naadiga Blues taasoo xagaagii lasoo dhaafay si aad ah isugu dayday saxiixiisa inkastoo ay awoodi weysay inay wajahdo qiimaha ay Sevilla ku dooneyso inay ku iibiso laacibkeeda.
Si kastaba ha ahaatee, suxufiga ka faalooda suuqa kala iibsiga ee Duncan Castles ayaa laga soo xigtay inay Chelsea dhammeysay qaybta heshiiska shaqsiga ah isla markaana ay majo-xeydaneyso inay u babac dhigto qiimaha ay kooxda reer Spain ku dooneyso inay ku iibiso difaaceeda 22-sano jirka ah.
Castles ayaa sheegay inuu Kounde sugayo inay marwada Chelsea u qaabilsan suuqa kala iibsiga ee Marina Granovskaia ay agaasimaha ciyaaraha Sevilla ee Monchi la meel dhigto heshiiska qiimaha uu saxiixan ku kacayo haddii ay noqoto suuqa January ama kan xagaaga dambe.
Arsenal oo todobo xiddig fasaxeysa bisha January... (Miyuu ku jiraa Aubameyang?)